कुकुर पाल्न लाइसेन्स अनिवार्य !
पाेखरा ५ असाेज- कुकुर पाल्न अनिवार्य लाइसन्स चाहिने भएकाे छ । कुकुर इमान्दार र वफादार जनावर हो । घर तथा घरका सदस्यहरुको राम्रोसँग रेखदेख गर्ने भएका कारण प्रायः मानिसहरुले घरमा कुकुर पाल्ने गर्छन् ।
कुकुर पालनको सौखिन हुनुहुन्छ भने अब लाइसेन्स आवश्यक पर्ने भएको छ। तर यो नियम नेपालका लागि भने होइन । भारतको उत्तरप्रदेशस्थित गाजियावादमा कुकुर पाल्नका लागि लाइसेन्स अनिवार्य लिनुपर्ने नियम बनाइको हो ।
गाजियावादका घरपरिवार जसले कुकुर पाल्न चाहन्छन् उनीहरुले अब नगर निगममा पाँच हजार भारतीय रुपैयाँ जम्मा गरेर लाइसेन्स लिनुपर्ने छ। लाइसेन्सविना उक्त क्षेत्रमा कुकुर पाल्न निषेध गरिएको छ।
त्यस्तै कुकुरले सडक या पार्कमा दिशापिसाब गरे पाँच सय भारतीय रुपैयाँ जरिवानासमेत दिनुपर्ने नियम पनि बनाइएको छ।
छाडा कुकुरको संख्या बढ्दै गएपछि र वाहिरी वातावरणमासमेत दुर्गन्ध फैलन थालेपछि उक्त क्षेत्रमा यस्तो नियम ल्याइएको गाजियावाद स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ ।
अचम्म ! जहाँ २ वटा बिहे नगरे हुन्छ कारबाही
नेपालमा एकभन्दा बढीसँग विवाह गरे बहु विवाहको मु*द्दा लाग्छ । यदि कसैले २ वा २ भन्दा बढी विवाह गरेको खण्डमा उसलाई ५ वर्ष जेल र ५० हजारसम्मको जरिवाना हुनसक्ने मुलुकी फौजदारी संहितामा उल्लेख छ । तर यो नियम नेपालका लागि हो ।
देश अनुसार आ–आफ्नै कानून हुन्छन् । एउटा यस्तो पनि मुलुक छ जहाँ दुई वटा विवाह नगरे उल्टै कारबाहीको भागेदार बन्नुपर्छ । अफ्रिकी मुलुक इरिट्रीयामा यस्तो अनौठो नियम बनाइएको छ ।
यो मुलुकको नियम नेपालको भन्दा ठिक विपरित छ । हरेक पुरुषले दुईवटा बिहे गर्नुपर्दछ । जहाँ पहिलो बिहेपछि अर्को बिहे नगर्दा उसलाई कानून लाग्छ । दोस्रो बिहे गरेन भने उसलाई उमेर कैद पनि हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
यस्तो नियम बनाइनुको कारण पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या निकै बढी भएर हो । महिलाको सुरक्षाका लागि पनि यस्तो नियम बनाइएको बताइन्छ । त्यसैले हरेक पुरुषले दुईवटा बिहे गर्नुपर्छ । यदि महिलाले विवाह गर्न नमानेमा उसलाई पनि उमेर कैद हुने व्यवस्था छ ।